‘माधव नेपालले आफ्नो कार्यकालमा ओलीलाई पनि पेलेको हो नि’ : वाचस्पति देवकोटा (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
‘माधव नेपालले आफ्नो कार्यकालमा ओलीलाई पनि पेलेको हो नि’ : वाचस्पति देवकोटा (भिडिओसहित)
प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७८, बुधबार
काठमाडौं, २४ कार्तिक । वाम विश्लेषक वाचस्पति देवकोटाले आफूले एमाले नछोडेको भएपनि यसमा नलाग्ने बताएका छन् । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल मिल्छन् भनेर कसैले नपत्याएको बेला उनीहरु मिलेको स्मरण गराउँदै उनले यसले आफूहरु पनि धेरै उत्साही भएको सुनाए ।
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले आफूहरु एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको लागि बिना शर्त लागेको पनि सुनाए । उनले पार्टीलाई भताभुंग गर्नेबारे पनि ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल कसैले पनि आफूहरुलाई नसोधेको स्पष्ट पारे । उनले पार्टी एकता जोगाउन नसकेको भनेर अध्यक्ष ओलीको आलोचना गरे ।
माधव नेपालले अध्यक्ष नै हुन पाईनँ भनेर तमक गरेको र त्यही तमकले पार्टी फुटेको उनले दाबी गरे । देवकोटाले माधव नेपाल नेतृत्वमा हुँदा हिजो ओलीलाई पनि पेलेको स्मरण गराए । उनले भने,‘माधव नेपालले पनि हिजो नेतृत्वमा हुँदा ओलीलाई पनि बाँकी राखेको हो र ? एमाले फुट्नुमा माधव नेपाल बढि दोषी हो ।’ नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर बनाउनको लागि ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल सबै दोषी भएको पनि देवकोटाको दाबी छ ।
ओलीलाई चुनौती, सुचीमा नपरेकाहरु निर्वाचित
काठमाडौं, १३ मंसिर । नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसम्मतका लागि तयार
१० सचिवको सरुवा, को कहाँ (सुचीसहित)
काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले १० सचिवको एकैपटक सरुवा गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद
राजेन्द्र लिङ्देनलाई लोहनीको साथ, राणाले पनि दिने दाबी
काठमाडौं, १३ मंसिर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गरेका राजेन्द्र लिङ्देनलाई पूर्व अध्यक्ष
काठमाडौं, १३ मंसिर । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा संस्थापन इतर समूह साझा उम्मेदवारको खोजीमा
ओमिक्रोन भेरियन्ट कुन–कुन मुलुकमा फैलियो, नेपालमा जोखिम कति ?
एजेन्सी, १३ मंसिर । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट हालसम्म १० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिइसकेको छ
ओली र रावलको शिक्षा कति ?
काठमाडौं, १३ मंसिर । नेकपा एमालेको महाधिवेशन अघि भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए
९ हजार परीक्षणमा आज २५९ संक्रमित थप, २६४ निको
काठमाडौं, १३ मंसिर । आज नेपालमा कोरोना भाइरसका २ सय ५९ जना संक्रमित थपिएका छन्
यी हुन् ओलीको सूचीबाहिरका उम्मेदवार (नामसहित)
चितवन, १३ मंसिर । नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार गरेको पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यको